“Manchester City waxay dooneysaa inay ku guuleysato Champions League-ga” – Pep Guardiola – Gool FM
“Manchester City waxay dooneysaa inay ku guuleysato Champions League-ga” – Pep Guardiola
Dajiye August 8, 2020
(Yurub) 08 Agoosto 2020. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Sky Blue ujeedkeeda uu yahay inay ku guuleysato xilli ciyaareedkan tartanka UEFA Champions League.
Manchester City ayaa u soo baxday wareegga Siddeeda ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay Real Madrid 2-1, kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka, taasoo ka dhigan in cel-celis ahaan labada kulan ee wareegan ay ku soo baxday goolal gaarsiisan 4-2.
Haddaba ciyaarta kaddib ayuu macalinka reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayuu la hadlay warbaahinta, wuxuuna yiri:
“Waxaan abuurnay fursado badan, waxaan dhalinay 2 gool kaddib qaladaadkii ay sameeyeen kooxda Real Madrid, ma ahan wax sahlan kooxdan”.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad ka adkaato laba jeer, Zinedine Zidane waligiis guuldaro kama soo gaarin kulamada bug baxda, waxaad arkeysaa deganaanshaha iyo shaqsiyada ay ku ciyaarayaan, way fiican yihiin”.
“Waxaan halkaan u joognaa inaan isku dayno inaan ku guuleysano tartanka UEFA Champions League”.
Kulamada CAAWA laga ciyaarayo tartanka UEFA Champions League & saacada la baasanayo
Xaqiiqooyin aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulanka caawa garoonka Camp Nou ku dhexmaraya Barcelona iyo Napoli ee Champions League